इन्जिनियर्स नेपाल | फागुन २१, २०७७,
घरको नक्सा बनाउनु चित्रकोर्नु मात्रै होइन । घर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत परामर्शपछिको योजना हो । कुनै घरको भित्र छिर्दा आनन्द आउँछ कुनै घरमा छिर्दा अप्ठारो महशुस हुन्छ । मुख्यतया घर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा नक्सामा भर पर्छ ।
घरभित्रका सबै कोठामा उज्यालो कसरी पु¥याउने ? थोरै ठाउँलाई कसरी उपयोग गर्ने ? कलर, डिजाइन, डिकोरेसन कस्तो हुने भन्ने घरको नक्साअनुसार तय हुन्छ ।
घरधनिको कन्सेप्ट र जग्गाको आधारमा नक्सा बनाउने काम इन्जिनियरले गर्छ । घर कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्रै इन्जिनियरले घरको खाका तयार पार्छ । नक्सामा झ्याल ढोकाकहाँ राख्ने, भ¥याङ कस्तो, कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ ।
सामान्य घर बनाउनको लागि स्टक्चर डिजाइन आवश्यकता नपरेपनि विशेष प्रकृतिको घरको लागि स्टक्चर डिजाइनरको सहयोग समेत लिनुपर्छ । यसले यतिको पिलर राख्ने, कस्तो विम राख्ने, कति साइजको राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा काम गर्छ ।
इन्जिनियरले नक्सा बनाउँदा पालिकाहरुले तोकेकै मापदण्डको आधारमा बनाउनुपर्छ । नक्साको काम त्यो सम्बन्धी अनुभव भएका सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक र सिभिल ओभरसियरले पनि गर्न सक्छ । कस्तो घर बनाउने हो त्यसै अनुसारको अनुभव भएको इन्जिनियर छान्नुपर्छ ।
नक्सा पास प्रकृया
पालिकाबाट पास हुनको लागि इन्जिनियरले नक्सा बनाउनु पर्छ। त्यसपछि नगरपालिकाले चेक जाँच गर्छ । नक्सा निर्माण पश्चात पालिकाद्वारा उपलब्ध गराइएको नक्सा फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। पालिकामा दर्ता गराई राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राजस्व पालिका अनुसार फरक फरक हुन्छ ।
पालिकाले जग्गा रहेको वडा कार्यलयलाई फाइल पठाउँछ । वडामा पन्ध्र १५ दिने सुचना टासिन्छ। त्यहि अवधिमा वडा कार्यालयबाट इन्जिनियर आएर घर निर्माण हुने ठाउँको अवलोकन गर्छन् ।
१५ दिनमा कसैले उजुरी गरेन भने सामान्यतय नक्सा पास हुन १ महिना लाग्छ । राम्रोसंग योजना बनाएर कामगर्दा नक्सा बनाउनको लागि प्रोजेक्ट अनुसारको समय लाग्छ।
पालिकाको इन्जिनियरले स्विकृती दिएपछि अस्थायी निर्माण इजाजत पत्र प्रदान गरिन्छ। त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु गरिन्छ । काठमाडौं महानगरले दुई फेजमा नक्सा पास गर्छ । महानगरले निर्माण इजाजत पत्र प्रदान गरेपछि एकै पटक निर्माण सम्पन्नको आवेदन दिनुपर्छ ।
अन्य पालिका अनुसार नक्सा पासको प्रकृया फरक फरक रहेको छ । केहि पालिकामा अस्थाई अनुमतिपत्र, स्थाई अनुमतिपत्र र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था रहेको छ । स्थाई अनुमतिको लागि घरधनीले पालिका डिपिसी सकिएपछि आवेदन दिनुपर्छ ।
पालिकाका इन्जिनियरहरुले डिपिसीसम्मको निर्माणको अवलोकन गर्नेछन् । नक्सा अनुरुप डिपिसी भएको छ छैन भनि हेर्छन् । नक्सा अनुसार निर्माण भएको खण्डमा पालिकाको इन्जिनियरले स्थायी निर्माणको अनुमति दिन्छन्। त्यसपछि नक्सा अनुसार घर बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
घर निर्माण सम्पन्न पश्चात फेरी आवदेन दिनुपर्छ । पालिकाको इन्जिनियर आएर घरको अवलोकन गर्छन् र रिपोर्ट बुझाउँछन् ।
नक्सा स्वीकृतीको लागि निश्चित क्षेत्रफलको ब्लुप्रिंट, ब्लुप्रिंटमा बाटो नदेखिएको खण्डमा वडाबाट घर–बाटो सिफारिस लिनुपर्दछ। जग्गाको ट्रेस,लालपुर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्र,जग्गाधनीको फोटो,तिरो तिरेको रसिद र नक्सा पेश गर्नुपर्ने छ ।
नक्सा बनाउने लागत
नक्सा बनाउन घर र इन्जिनियर अनुसार फरक पर्छ । सामान्य घरको नक्सा बनाउन थोरै पैसा लाग्छ भने विशेष किसिमको घर बनाउन केहि बढी लाग्छ । अर्को इन्जिनियरको अनुभवको आधारमा पनि इन्जिनियर शुल्क लिने गरेका छन् ।
सामान्यतय साढे २ तल्लाको मध्यम खालका घरको नक्सा बनाउन ३० हजार देखी १ लाखसम्म इन्जिनियरहरुले लिदै आएका छन् । अनुभवी इन्जिनियरसंग परामर्श लिदाँ त्यो भन्दापनि बढी हुनसक्छ । प्राविधिकहरुले काम अनुसारको शुल्क लिन्छन् ।
इन्जिनियर्स नेपाल | फागुन ६, २०७६